I-5 SaaS yoMthengi iphumelele eyona ndlela | Martech Zone
Zihambile iintsuku apho amaqela okuphumelela kwabathengi ebulaleka ngeefowuni ezingenamda kunye nabathengi ukuba baphathe. Kungenxa yokuba ngoku lixesha lokungabinanto kwaye ufumane okungakumbi ngokubhekisele kwimpumelelo yabathengi. Yonke into oyifunayo zizicwangciso ezithile zobuhlakani, kwaye mhlawumbi ezinye uncedo oluvela kwifayile ye- Uphuhliso lwesicelo se-SaaS Nkampani.
Kodwa, nangaphambi koko, konke kuyehla kukwazi iindlela ezifanelekileyo zempumelelo yomthengi. Kodwa kuqala, uqinisekile ukuba uyalazi igama. Masibone.
Yintoni umsantsa wokuphumelela, kwaye kutheni kubalulekile?
Ngamazwi alula, xa umnqweno womthengi ungangqinelani nezinto ezibonelelwa yimveliso yakho, kukho umsantsa wokuphumelela. Kwaye lo msantsa ulele ngaphakathi kweso sithuba sonxibelelwano sincinci, uninzi lwamashishini alunakho ukugcwalisa. Lo msantsa ubalulekile kuba uya kuthintela ukungaxhomekeki kwakho kwintengiso, ukugcinwa, ukuthengiswa, ukuthengisa kunye nokunye okuninzi.
Nazi iindlela ezintlanu eziphezulu ekufuneka ungene ngazo ukuya phezulu kwisicwangciso somdlalo wempumelelo yomthengi. Jonga!
Olona qheliselo luhle #1: Bonakalisa umbulelo, Landa iiNgxelo, Yakha ubudlelwane
Enye yezona ndlela zintle zokuphumeza impumelelo yomthengi soze uyeke ukubonisa umbulelo wakho. Kwaye oku, 'enkosi' yeyona mantra ifanele ukuculwa.
Intliziyo yalo mkhuba ilele kwinto yokuba umthengi wakho ukhethe kulo lonke ukhuphiswano lwakho. Ke ukuba nombulelo yinto eqinisekileyo kumthengi ukuba bafuna okona kulungileyo. Ngaphandle koko, unokufaka oku kwizigaba ezininzi zeenkonzo zakho kunye neenkqubo. Umzekelo, xa umthengi engena kuqala, evula isilingo sasimahla, evuselela izicwangciso, okanye eshiya ingxelo.
Oko besikhankanyile ingxelo, yenye ibhokisi ebalulekileyo ekufuneka uyijongile. Khuthaza abathengi bakho ukuba banike ingxelo kuwo onke amabakala, kwaye kufuneka ukhethe ngokuthe ngqo. Ngelixa ukumamela umthengi kuhamba ixesha elide ekuqinisekiseni ukoneliseka kwabathengi, kungaphezulu koko. Ukuba usebenzisa ingxelo kwicala elifanelekileyo, banokukunceda ubone izithuba ezonelisayo.
Ngenxa yoku, qinisekisa ukuba ingxelo ifikelela kwiqela lemveliso. Kwaye ukuba ungayenza le nto yenzeke ngexesha elililo nangcono. Kubonakele xa abathengi banokunxibelelana ngqo namaqela emveliso, okanye abaphandi, baziva bezithembile ngakumbi.
Unokwenza eli thuba lokuba ube nolwalamano kunye nokwakha ubudlelwane nabaxhasi. Ngelixa abathengi bakho bexabisekile kuwe, kufuneka ubazise ngokufanayo.
Olona qheliselo luhle #2: Yenza elona liXesha lokuSebenza, elibizwa ngokuba liXesha leGolide
Njengokubonakala kokuqala kukugqibela, ixesha lokuqalisa kuyo yonke imveliso liyimigodi yamathuba egolide. Lixesha apho umthengi ekwimo yakhe yokulangazelela ukuzama izinto ezintsha kunye namathuba. Ke ngoko ukuyenza iphumelele, khuthaza unxibelelwano olusebenzayo kwasekuqaleni.
Yila amanqaku amaninzi okwenza ukuba umthengi azive ekhuthazekile ukuba awalandele. Ngaphandle koko, zibumbe kwimibhobho yeziganeko ezibonakala ngathi ziphumelela ngokukhawuleza kumthengi. Ngaphezulu, le misitho kufuneka ibenokubakho kuwe nakulwaneliseko lwabathengi.
Nangona kunjalo, eli ikwalixesha lokuba ubenakho ukuhambisa ezona nkonzo zakho zibalaseleyo. Kwaye lelona xesha lililo lokubamba abathengi kunye nokuqala kancinci okanye abo bangakwaziyo ukufikelela kumanqwanqwa abo. Nokuba yenza izandla zakho Iimveliso ze-SaaS okanye uqhagamshele kwiinkampani ze-SaaS, kodwa ungavumeli eli nqanaba liphume.
Masishiye i-nugget yegolide! Ukusebenza kwakho kweli xesha legolide kunefuthe ngqo kwindlela eya kuqhubeka ngayo lonke uhambo lwabathengi. Ungalibali ukunika okona kungcono!
Eyona ndlela ilungileyo # 3: Gxila kwiimfuno zomsebenzisi kunokuthengisa iithagethi
Nje ukuba amashishini agqibe nge Umthengi we-SaaS ukhwela ebhodini, baqala ngokufundisa abathengi babo malunga nazo zonke izinto ezipholileyo. Kodwa khumbula iiklasi zakho zezibalo emva esikolweni? Usenokuzibuza ukuba i-algebra okanye i-trigonometry iza kukuhlangula nini ebomini benene.
Kuyafana kubathengi bakho xa ubagrumba ngawo onke amanqaku emveliso yakho. Yithathe lula! Ngelixa ulandela ezi zinto zimbini zingasentla, uya kufumana umfanekiso ocacileyo wento efunwa ngumthengi wakho. Kwaye ayisiyo mali yexesha? Ke kutheni uchitha ixesha lakho kunye nomthengi wakho kwizinto abanokungazifuni, okanye ubuncinci okwangoku?
Chitha ixesha kwizinto ezifunwa ngumthengi wakho emva koko unike isisombululo. Ngaphandle koko, kufuneka usoloko unendlebe malunga neengxaki zabaxhasi. Kuqala, mamela, emva koko ubuze imibuzo efanelekileyo, emva koko udlulise indlela imveliso yakho enokusombulula ngayo ooyeha babo. Kwangokunjalo, unokujolisa ekunikezeleni ngoqeqesho olusebenzayo kubaxumi kunaleyo inde kwaye iyadika yethiyori.
Eyona ndlela ilungileyo # 4: Cinga i-B2B njenge-H2H yokugcinwa ngcono
Uninzi lwamashishini luchithe ixesha elininzi namandla ekwenzeni izicwangciso. Kodwa emva koko benza impazamo yokukopa-ukunamathisela kubo bonke abanye abathengi. Njengabaguli ababini banokufuna unyango olwahlukeneyo, nkqu nakwisigulo esinye, kuyafana nakwiingxaki zabaxhasi bakho.
Kuya kufuneka uqonde ukuba i-B2B kufuneka iphathwe njenge-H2H. Thatha ukuba nguBuntu eBantwini okanye kwiNtliziyo yeNtliziyo, njengoko ubona kufanelekile, kodwa hambisa umyalezo.
Yabelana ngamabali empumelelo yomthengi namaqela akho kwaye ubancede bafunde ukuba yintoni esebenzayo nengasebenziyo. Ngokuthe ngcembe kuya kufuneka ubaqeqeshe benze izigqibo ezingxamisekileyo ukuze bakwazi ukuhambisa izisombululo ezilungiselelwe bona. Kuyanceda ukwakha ifayile ye- Isicwangciso sentengiso se-SaaS ingcono kwaye isebenze.
Okukhona ujonga eyakho ishishini lomthengi njengabantu kwaye hayi amashishini, kokukhona uya kuphucula ukugcinwa kwabo. Abaphathi beMpumelelo yaBaxumi abamkela lo mgaqo-nkqubo benza ukugcinwa kwabathengi kugude ngakumbi.
Eyona ndlela ilungileyo # 5: Ukuzenzekelayo iiNkqubo zeMpumelelo zabaThengi ze-SaaS zokuphumelela ngokukhawuleza
Abaphathi bempumelelo yomthengi banemithwalo yemfanelo emininzi, ukusuka kwiinkqubo zokuyila nokugcina umkhondo womthengi ngamnye. Nangona befumana ukuphonononga uninzi lwezakhono zabo, imisebenzi inokujika ibe ngumthwalo ngaphandle kwexesha. Oku kuya kuchaphazela ngokuthe ngcembe impumelelo yomthengi.
Ke sebenzisa isoftware yolawulo lomsebenzi zokwenza iinkqubo zakho ziphumelele ngokukhawuleza kwindawo yempumelelo yomthengi. Ukuzenzekelayo kuya kukunika igumbi lokuhlengahlengisa iinkqubo zakho kwaye ujonge kwezinye izinto ezinje ngentengiso kunye nokwandiswa.
Ngaphandle koko, iya kukunceda ukunciphisa okushiyekileyo kwaye ukhawuleze ixesha lesisombululo. Ngokuhamba ngokulula kodwa okwanelisayo, uya kuba nakho ukufikelela kubo bonke abathengi, ngexesha. Ngapha koko, uyakufumana ixesha lokuhlalutya kunye nokuphucula iinkqubo zokukhula okungcono.
Iziphumo ziya kufaneleka!
Ke le yindlela ukuphumelela kweNtengiso ye-SaaS okunokukunceda ngayo kwiinjongo zeshishini lakho ixesha elide. Yimveliso enefuthe enokuzisa lonke ulawulo lwabathengi kunye nezixhobo zokuthengisa kwindawo enye. Iqonga elinomdla kwaye elinokutshiseka eliya kukunceda ekwandiseni ukugcinwa kwabathengi ekusasazeni elo lizwi limnandi lomlomo, sonke siyalangazelela.
tags: ku sebenzab2bUkukhwela kumthengiimpumelelo yomthengiukukhwelaii-saasisoftware njengenkonzoumsantsa impumelelo
UHardik Oza yingcali ye-SEO engaphezu kweminyaka eli-9 yamava. Unceda iinkampani ukuba zikhulise amashishini abo. Ukwabelana ngeengcinga zakhe kupapasho olongezelelekileyo njengeSEMrush, Abantu beeNjini zokuKhangela, kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo namhlanje. Mlandele kuTwitter @Ozaemotion.